Blog Juan Herranz › Buugaag iyo filimaan qof walba.
Sheekooyinka hadda jira
Sheekooyin qarsoodi ah
Sheekooyinka xiisaha leh
Sheekooyin naxdin leh
Riwaayado macquul ah
Sheekooyin qosol leh
Riwaayado cajiib ah
Sheekooyinka sheekooyinka sayniska
Riwaayado isku dhow
Riwaayado taariikhi ah
Riwaayado riwaayad ah
Buugaagta taariikh nololeedka
Buugaag aadan ka maqnaan karin...
Hagaag, cinwaanku wuxuu ahaa mid soo jiidasho leh. Sababtoo ah waxa aad halkan ka heli doonto waa qaar ka mid ah buugaagta qofka ilaaliya blog-gan. Oo yaa og, laga yaabaa inaad rabto inaad akhrido qaar ka mid ah inta aad ku jirto… Waxaad ku haysaa warqad iyo sidoo kale ebook ahaan. Qaar ka mid ah waxay soo mareen tifaftirka si ay u adeegsadaan laakiin…
Chuck Wendig's 3-da Buug ee ugu sarreeya
In aad maanta qoraa noqoto wax kale ayay noqon kartaa. Sababtoo ah maqal-muuqaalku wuxuu gaaraa heerarka Dantesque ee madadaalada adduunka. Marka laga reebo in haddii aysan jirin sheekooyin waaweyn oo ka dambeeya, wax walbaa waxay u burburi lahaayeen sida xabbad sonkor ah. Markaa marka goobaha filimada, shirkadaha ciyaaraha fiidiyowga, 3 iyo 4D ama xitaa metaverse ay u maleeyeen inay wax walba ka adkaadeen ...
Hooyooyinka, waxaa leh Carmen Mola
Xilliga xukunka kama dambaysta ah ayaa imanaya Carmen Mola. Ma dariiqa guusha ma raaci doontaa mise kuwa raacsan ayaa ka tagi doona marka la ogaado madaxeeda saddex-madaxeed? Mise…, caksigeeda, dhammaan buuqa ay abuureen asalka ama ma aha kuwa saddexda qoraa ee ka dambeeya magaca beenta ah ee…
Dhammaan Xagaaga Dhamaadka, waxaa qoray Beñat Miranda
Ireland waxay ku aamini lahayd xagaageeda qulqulka Gacanka oo awood u leh inuu gaadho loolka British-ka ah, sida muuqaal badeed oo yaab leh, oo leh heerkul aad uga wanaagsan gobol kasta oo aagga. Laakiin ha khaldin, in xagaaga Irish sidoo kale uu leeyahay dhinac madow oo ka mid ah cagaarka aan la koobi karin ee…
Ololka Phocaea, ee Lorenzo Silva
Waxa imanaysa mar uu hal-abuurnimada qoraagu daah furay. wanaagga Lorenzo Silva wuxuu siinayaa inuu soo bandhigo khayaali taariikhi ah oo cusub, qoraallo, sheeko-yaal dambiyo iyo shaqooyin kale oo iskaashi oo la xasuusan karo sida sheeko-abuurkiisii ​​ugu dambeeyay ee afarta-gacan ee uu la jiray Noemi Trujillo. Laakin waligeed ma dhibayso in aad soo kabsato...
3 buugga Asa Larsson ugu fiican
Waxa la xiriira abuuritaanka dugsi wanaagsan ayaa ah in aakhirka ay jiraan arday wax -tar leh. Dhul -gariirka Nordic -ka ee aan la soo koobi karin ee nooca madow, Asa Larsson waa mid ka mid ah ballan -qaadyadii toban sano ka hor oo ka sii mid ahaaday iibiyayaashii ugu wanaagsanaa noocyadan oo leh astaan ​​astaan ​​u ah asalka. Waxay…
3-da Filimood ee ugu sarreeya Ewan McGregor
Shaleemada gadaasheeda waxaa ku jira safka labaad oo ay ka buuxaan jilayaal iyo atariisho u hamuun qaba in ay ficil galaan si ay u dafiyaan ammaanta shaneemooyinka Pitt, Deep, DiCaprio iyo shirkadda. Ewan McGregor waa mid ka mid ah jilayaasha adag ee adag. Turjumaan awood u leh inuu...
Saabuun iyo Biyo, waxaa qoray Marta D. Riezu
Sofistication raadinta heer sare ee moodada. Heerkaas xarrago leh ee doonaya inuu kor u qaado nooc ka mid ah meesha allabariga halkii uu ka istaagi lahaa, wuxuu keeni karaa saameyn lid ku ah. Xataa waxaa laga yaabaa in uu maalin dariiqa u soo baxay isagoo qaawan sida boqorkaas sheekadu ku jirto, isaga oo u haysta in uu baxayo...
3 buug ee ugu fiican María Oruña
Iyada oo leh qoraaga María Oruña, goobta hadda ee qorayaasha sheeko-madow ee Isbaanishka ayaa la sameeyay, meel sharafeed oo ay la wadaagto Dolores Redondo iyo Eva García Sáez. Ma aha in aan ula jeedo in aynaan helin qoraayaal badan oo ku beera hiddahan hibo la mid ah, laakiin shaki la'aan kuwan ...
3-da ugu sarreeya ee Andrei Kurkov
Had iyo jeer way wanaagsan tahay in la dhex galo xaqiiqada dhabta ah oo loo rogay sheeko cusub oo leh caddayn gaar ah. Is-dhiibitaanka waxa jira meel loogu talagalay tusaale ahaan, sarbeeb ahaan iyo xitaa kuwa cajiibka ah haddii ay taabato. Oo waa run in Kurkov si fiican u yaqaan. Qoraaga Yukreeniyaanka ah wuxuu sahamiyaa dhammaan fursadaha uu leeyahay grotesquekan riyada, si uu ugu waco si uun. …
3-da buug ee ugu fiican Santiago Gamboa
U fiirsashada shaqada Santiago Gamboa waxay had iyo jeer bixisaa aragti bulsho ee nidaamka koowaad. Ujeeddadu waxay tahay in Gamboogu uu yahay male-awaal, dabcan, laakiin sooyaalkaas qormada lama filaanka ah waxa si caqli-gal ah innoogu soo bandhigay jilayaal, siyaalo loo arko duruufaha bulsho, tilmaan-bixinno lagu rusheeyey fikraddaas...
Goobta, waxaa qoray Luis Montero Manglano
Yaa yiri nooca tacaburku wuu dhintay? Waxay ahayd arrin qoraa ah sida Luis Montero oo u soo wajahday taabashadiisa gaarka ah ee shakiga si aan dhammaanteen dib uga fikirno in ay wax yar ka harsan yihiin in la ogaado adduunkan iyo waxa la isku dayo. Had iyo jeer waxaa jira…
Bogga1 Bogga2 ... Bogga243 Xiga →
Ilaa 2005 © Juan Herranz 2022
Bogga xiga "
baadi: Wax koobiyeyn la'aan